Inona no hery miafina raketam-pifandraisana nofollow?
Ny mpandika tranonkala rehetra dia mitaky zavatra mitovy. Ireo rohy Dofollow dia ilaina ho an'ny tranonkala fanatsarana, fa nofollow dia tsy misy ilàna azy. Na izany aza, tsy izany no izy. Mety misy ny fepetra fanampiny mihatra. Jereo fepetram-pampiasana ho an'ny antsipirihany. Any aoriana, io fomba fijery io dia midika fa mandany tranobe be dia be ianao izay azonao atao amin'ny backlinks nofollow.
Azo hazavaina avy amin'ny antony marim-pototra maromaro izany. Voalohany indrindra, Google dia mbola mikarakara ny rohy nofollow ary mahita azy ireo ho manan-danja amin'ny fanatsarana ny lazan'ny marika. Manintona ny saina amin'ny tranokalan'ny nofollow rehefa manandrana mamintina raha manana sariohatra salama tsara ianao na tsia.Ankoatra izany, mbola azo amboarina ny backlinks nofollow, izay manampy mba hahazoana antoka fa velona ny loharanon-tranonkala iray. Ny backlinks Nofollow dia manana anjara toerana manan-danja eo amin'ny tombony ara-barotra lavitra kokoa.
Ahoana ny fihetsik'i Google amin'ny backlinks nofolow?
Ny marina dia lazaina, Google dia mizara roa backlinks dofollow sy nofollow. Amin'izao fahasamihafana tokana amin'ny toetoetran'ny jiosy mifandraika, dia mandalo amin'ny backlinks nofollow izy io. Google dia mihevitra ny rohy nofollow ho ampahany amin'ny sehatry ny backlink. Raha toa ka misy rakitra manana backlink ny drakolahy, dia toa mampiahiahy azy ireo ny fikarohana. Ireo sariitatra tsy mahazatra toy izany dia mety hahazo sazy. Noho izany, manana rohy nofollow ny fahamendrehana fiarovana tsara.
Ny tombony iray hafa amin'ny backlinks nofollow dia ny hanampy azy ireo hikirakira sy mikaroka ny tranokalanao. Ny rohy Nofollow dia mety hanosika an'i Google hanaparitaka ny iray amin'ireo tranonkalanao izay tsy nahazo trafikana talohan'izay. Ny tena manan-danja eto dia ny rohy nofollow dia mbola manome antoka fa ny milina fikarohana dia afaka mahita, manaparitaka ary manindry ny tranokalanao, na dia tsy mandalo aza ny fananana na manamarika ireo teny fanalahidy amin'ny teny anglisy.
Tsara koa ny manamarika fa ny rohy nofollow dia mety handondona ny vokatra. Maro ireo webmasters no mandà ny hiasa miaraka amin'ny sehatra backlink nofollow satria mihevitra izy ireo fa tsy mahomby amin'ny fampandrosoana ny orinasa. Ny olana dia ny tsy fahitan'izy ireo ny tena lanjany amin'ny rohy nofollow. Raha mamoaka votoaty goavana amin'ny sehatra iray izay manome rohy nofafana fotsiny ianao, dia mbola mety mahasoa anao ho an'ireo mpampiasa izay mahita ny votoatinao mifanaraka aminao sy ny kalitaony, dia hizara izany amin'ny sehatra kely kokoa. Noho izany, ho vokatr'izany, dia mbola hahita karazam-bolo goavana mahazatra ianao.
Izany no mahatonga ny rohy nofollow mety tsy hanome ny fitovian'ny rohy amin'ny fomba ahafahan'ny maro amintsika mahazo, fa mbola sarobidy ho an'ny tranokala fikarohana. Tsy misy isalasalana fa manatsara ny tranokalan-tseraseran'ny SERP ny nofelohin'ny nofollow. Ary ny fijery, amin'ny fe-potoam-piasany, dia mety hitondra fifamoivoizana amin'ny dofollow izay mitondra rohy mankany amin'ny tranokalanao.
Mba hamaranana azy dia tiako ny milaza fa ny backlinks dofollow dia tokony ho laharam-pahamehana fara-tampony, fa tsy tokony hamela ny fahafahana hanova ny rohy amin'ny nofollow tag. Ireo rohy ireo ihany koa dia manana fahafahana hanampy amin'ny fanasokajiana sy famoronana rohy fanampiny Source .